DF oo si adag uga hadashay weerarkii dadka badan lagu laayey ee ka dhacay... - Caasimada Online
Home Warar DF oo si adag uga hadashay weerarkii dadka badan lagu laayey ee...
DF oo si adag uga hadashay weerarkii dadka badan lagu laayey ee ka dhacay…
Muqdisho (Caasimada Online) – War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa aad loogu camaareeyey weerarkii ay kooxda Xuutiyiinta ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadan, xilli uu ka soo degayey ra’iisul wasaaraha dalka Yemen iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirrada.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa weerar seddex qaraxyo ah lagu beegsaday shalay gelinkii dambe oo Arbaco ahayd (30 December) gegidda diyaaradaha ee Cadan ee Jamhuuriyadda Yemen, kaasi oo sababay geerida iyo dhaawaca tobaneeyo ruux oo rayid ah,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka dowladda Soomaaliya.
Qoraalka ayaa intaas ku sii daray, “Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxa ay xaqiijinaysaa in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay garab taagantahay Dowladda iyo Dadka aanu walaalaha nahay ee Yemen, waxa ayna tacsi tiiraanyo leh u diraysaa ehellada dhibanayaasha, iyadoo caafimaad-qab degdeg ah u rajaysay kuwa ku dhaawacmay.”
Ku dhawaad 20-qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay garoonka diyaaradaha Cadan oo ah magaalada labaad ee dalka Yemen ugu weyn, xiligaas oo ay ka soo degeysay dowladda cusub ee lagu soo dhisay Sacuudiga.
Qaraxyada ayaa dhacay iyadoo wasiirradu ay isku diyaarinayeen inay ka soo degtaan diyaaradda, waxuuna Ra`iisul Wasaare Maeen Abdulmalik Saeed sheegay in isaga iyo golihiisa wasiirrada ay badqabaan, balse dad badan ay goobta ku dhinteen.
Wasiirka Warfaafinta Moammer al-Eryani ayaa ku eedeeyay mucaaradka Xuutiyiinta inay ka dambeeyeen waxa uu ugu yeeray “falka argagixiso ee wuxuushnimada ah”
Yemen waxaa ragaadiyay dagaal soo jiitamayay tan iyo sanadkii 2015-kii, markaas oo isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee dalalka Carabta ay bilaabeen howlgal militery oo lagula dagaallamayo kooxda Xuutiyiinta, laguna soo celinayo xukunka Madaxweyne Abdrabbuh Mansour Hadi.